नर्सिङ पेशाकाे मर्यादा बिपरित हर्कत
आश्विन १०, २०७७ १३:१५ मा प्रकाशित
यही असोज ६ गते वीर अस्पतालको ट्रमा सेन्टरमा एक नर्सले अनौठो हर्कत देखाउनु भयो। भदौ २९ गते जुम्लाबाट १९औं अनशन सुरु गर्नुभएका डा. गोविन्द केसी यही असोज ६ गते दिउँसो काठमाडौं आउनु भएको थियो। शिक्षण अस्पतालमा जानु खोज्नु भएका केसीलाई सुरुमा प्रशासनले त्यहाँ जान दिएन। उहाँलाई राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरमा लगियो।
केसीलाई जबरजस्ती ट्रमा सेन्टर लगिएपछि उहाँका समर्थकहरु ट्रमा सेन्टरमा जम्मा भई विरोध प्रदर्शन गरिरहेका थिए। सोही साँझ केसीलाई शिक्षण अस्पताल पठाइयो। केसीलाई शिक्षण अस्पताल पठाउने विक्तिकै उहाँको समर्थन जनाउन ट्रमा सेन्टर पुग्नुभएकी ती नर्सले हंगामा गर्नुभएको हो।
स्वास्थ्यकर्मीले ड्युटीका बेला लगाउने सेतो कोट लगाएरै आउनुभएकी ती नर्सले अस्पतालभित्र नाच्ने, गाउने सामानहरु फाल्ने, तोडफोड गर्ने व्यवहार गरेको भिडियोमा देखिन्छ। उहाँले अस्वभाविक गतिविधि गरेपछि प्रहरी तथा सुरक्षाकर्मी सहयोगमा समातेर बेडमा राखी उपचार गर्ने प्रयास गरिएको थियो।
उहाँले उपचार गराउन अस्वीकार गर्दै इमरजेन्सी ड्युटीमा रहेका स्वास्थ्यकर्मी र सुराक्षाकर्मीलाई थुकिदिएको दृश्य भिडियोमा देखिन्छ। अस्पतालभित्रै यो हर्कत गर्ने नर्स जिता बराल हुनुहुन्छ । जिता बराल नर्सिङ काउन्सिलकी सदस्यसमेत हुनुहुन्छ। उहाँले किन यस्तो व्यवहार गर्नुभयो ? जानीजानी हो वा बेहोसीमा ?
केही सञ्चार माध्यममार्फत उहाँको असामान्य व्यवहारको भिडियो बाहिरिएपछि अहिले यही प्रश्न धेरैले गरिरहेका छन् । नर्स जिता बरालको व्यवहारले समग्र नर्सिङ पेशाको मान, मर्यादामा आँच पुगेको चर्चा भइरहेको छ।
जिता बरालकाे भनाई
यस विषयमा आफूलाई केही थाहा नभएको दावी नर्स जिता बरालले गर्नुभएको छ। अनसनमा रहनुभएका डा.गोविन्द केसीलाई ट्रमा सेन्टरमा ल्याइएपछि आफू त्यहाँ गएकाे बरालले जानकारी दिनुभयो। ‘म अस्पतालबाहिर नै थिएँ। डा.केसीलाई देख्नेबित्तिकै म निकै भावुक भएँ’ हेल्थपार्टीसँग कुरा गर्दै बरालले भन्नुभयो– ‘जिकेसीलाई प्रहरीहरुले समातेर गाडीबाट झारिरहेको देख्दा म भावविह्ल भएँ।’ त्यसपछि आफूले गरेको कुनैपनि कुरा याद नभएको उहाँको दाबी छ।
‘मैले के–के भनेँ, के–के गरेँ मलाई केही याद छैन। मलाई कसले अस्पतालभित्र लगे त्यो पनि थाहा छैन।’ बराल भन्नुहुन्छ। पछि आफूबाट त्यस्तो गतिविधि भएको भन्ने सुनेर आश्चर्य चकित भएको उहाँको भनाइ छ। आफूले सुरुदेखिकै भिडियो हेर्न पाउनुपर्ने माग उहाँको छ। ‘यदि मिडियामा आएजस्तो अस्पतालमा मैले अराजक गतिविधि गरेको रहेछु भने म कारबाहीको भागिदार हुनेछु।’ बरालले भन्नुभयो।
नर्स बराल आफूलाई सामाजिक अभियन्ता भनेर चिनाउने ज्ञानेन्द्र शाहीको अभियानमा जोडिनु भएको छ । बरालले अस्पतालमा त्यस्तो व्यवहार गरेपछि कसैले फोन गरेर ज्ञानेन्द्र शाहीलाई त्यहाँ बोलाएको थियो। शाही आएर थमथमाएपछि चुपचाप शाहीसँग गएको ट्रमा सेन्टर स्रोतले जानकारी दिएको छ।
नर्स बरालका ती हर्कतको भिडियो धेरैले खिचेका थिए। ज्ञानेन्द्र शाही ट्रमा सेन्टर आएर सबैलाई भिडियो डिलिट गर्न धम्की दिएका थिए। केहीको डिटिल गर्न पनि लगाएको स्रोतले जानकारी दिएको छ। नर्स बरालले शाहीले त्यसरी भिडियो डिलिट गर्न धम्की दिएकाे कुरा साँचो भए उनीमाथि कारबाही हुनुपर्ने बताउनुभयो।
‘ज्ञानेन्द्र शाही अस्पताल आएर भिडियोहरु डिलिट गर्न लगाएको साँचो हो भने उहाँलाई पनि कारबाही गर्नुपर्दछ।’ बरालले भन्नुभयो, ‘तर मैले सुरुदेखिका फोटो, भिडियो हेर्न पाउनुपर्छ।’ गल्ती गरेको भए आफू कारबाही भोग्न तयार रहेको उहाँले दोहोर्‍याउनुभयो।
ट्रमा सेन्टरमा भएको त्यो घटना निकै निन्दनीय भएको नेपाल नर्सिङ संघकी सल्लाहकार एवं पूर्व अध्यक्ष प्रमिला देवान बताउनुहुन्छ ।
हरेक नर्सका लागि अस्पताल मन्दिर भएकाले त्यहाँ कस्तो व्यवहार गर्ने भन्ने कुराको जानकारी एक नर्समा हुनु जरुरी रहेको देवानको भनाइ छ। ‘नर्सिङ पेशाको आचार संहिताले नर्स र जनता, नर्स र व्यवहार, नर्स र पेशा अनि नर्स र सहकार्यलाई अनुसरण गर्नुपर्छ भनेको छ।’ उहाँ भन्नुहुन्छ।
नर्स आफ्नो पेशाका क्रममा मात्रै नभएर आज जनतामाझ पनि उत्तिकै नम्र र जिम्मेवार हुनुपर्ने उहाँको बुझाई छ। ‘नर्सिङ बिरामीको सेवा गर्ने पेशा भएकाले नर्सको व्यवहार नम्र, हँसिलो र सकारात्मक सोचको हुनुपर्दछ।’ देवानले भन्नुभयो, ‘प्रत्येक नर्सले यी आचारसंहितालाई बुझ्नु पर्छ।’
ट्रमा सेन्टरमा नर्स बरालले गरेको अवाञ्छित, अमर्यादित र अमानवीय व्यवहार स्वयम् नर्सका लागि मात्रै नभई बिरामीलाई समेत असर पर्ने खालको भएको देवानको ठहर छ। बरालले देखाउनुभएको गतिविधिले कलिला नर्सहरुलाई सहनशील नभई विद्रोही बनाउने उहाँ बताउनुहुन्छ।
‘अहिले विभिन्न मागहरु राखी केही नर्सहरु आन्दोलित पनि छन्।’ देवानले भन्नुभयो, ‘नर्सहरुको समस्याबारे बोलिदिन हामी नर्सहरु नै काफी छौँ, र बोलिरहेका पनि छौँ।’ नर्सको अधिकारका लागि नर्सिङ भन्दाबाहेकका व्यक्तिलाई समावेश गरी विभिन्न समूह बनाउन आवश्यक नरहेको उहाँको भनाइ छ। यस्ता गतिविधि नर्सिङ पेशालाई सुहाउँछ ? देवान प्रश्न गर्नुहुन्छ।
दोषी देखिए कारबाही हुन्छ : नर्सिङ संघ
ट्रमा सेन्टरमा नर्स जिता बरालले गरेको हर्कत अमर्यादित र अशोभनीय भएको नेपाल नर्सिङ संघकी अध्यक्ष प्रा. मनकुमारी राई बताउनु हुन्छ।
‘नर्सिङ आफैँमा संवदेनशील पेशा हो। यो पेशामा आवद्ध जो कोही नर्स पनि कारुणिक र दयालु हुनुपर्दछ।’ राई भन्नुहुन्छ,‘अमर्यादित र अशोभनीय गतिविधि नर्सले कल्पनासम्म गर्न मिल्दैन।’ जिता बरालको व्यवहारले समग्र नर्सिङ पेशामा धक्का पुगेको उहाँको ठहर छ।
ट्रमा सेन्टरले घटनाबारे छानबिन गर्न सहयोग गर्न भन्दै पत्र पठाएपछि संघले ३ सदस्यीय छानबिन समिति बनाएको राईले जानकारी दिनुभयो। जिता बराल नर्सिङ संघको आजीवन सदस्य रहेकाले दोषी ठहरिएमा कारबाही गरिने उहाँको भनाइ छ।
नर्भिकको धन्दा : बिरामी बोलाएर चर्को असुली, डाक्टर गायब
कान्ति बाल अस्पतालमा ३५ नर्स तथा २० डाक्टरलाई रोजगारीको अवसर
बाग्मती प्रदेशले एकैपटक माग्याे २३७ विद्यालय नर्स
आश्विन ०८, २०७७
आश्विन ०४, २०७७